Tsy aleo ve mipiraty sy...
2008-01-22 @ 07:30 in Spaoro
Tsy sanatria manohitra ny fananjehana ny piraty sy ny karazany ezahin'ny artista amin'izao fotoana izao fa misy kosa ny zavatra tsy lefitra intsony. Amin'ny ankapobeny ny atao hoe piraty rehefa resaka sangan'asa sy varotra dia maka tahaka ary mivarotra azy amin'ny vidiny mora kokoa. Ny piraty noho izay fakana tahaka izay dia ratsy kokoa noho ny tena izy matetika ny kalitaony. Fa ity atrehina amin'izao fotoana izao ity kosa mba tsy rariny fa ny piraty indray no tsara lavitra noho ny "tena izy" (dia tsy hitako ny voambolana asolo io tena izy io satria ry zareo no ara-dalàna manko.
Resaka fampitana baolina mivantana izy ity ry zareo a! Hitanareo ihany fa anatin'ny vondrona Afrikana isika ary misy lanonam-panatanjahantena tampony ho an'i Kaontinanta ety. Dia manaraka izany indray ny mpitia baolina fandaka e! Fa nirehareha mihitsy ny mpitondra fanjakana nahaloa ny 600.000€ saram-pandefasana mivantana ireo lalao mandeha amin'ity fifaninanana ary nisy aza mpandray anjara tahaka an'i Zambia tsy nahaloa io vola tamin'ny LC2 nahazo ny tsena ara-dalàna io dia malahelo ny mpitia baolina any. Ny antsika moa filankevitry ny minisitra no nanapa-kevitra handoa ny vola izay mitontaly vidy mihoatra ny Ar1.000.000.000 mihitsy. Tsy ho voavidin'ny Tvm izany ka teo no niteraka ny fandraisana andraikitra tamin'ny fitondram-panjakana.
Saingy ny sary nampitain'ity LC2 ity aty Madagasikara kosa ry zareo no tena tsy rariny mihitsy. Izany no tena atao hoe efa mifotetaka ny sary fa mbola mi-smurf izany ny olona sy ny baolina. Toy ny sary mandeha mitsitapitapy e! nefa dia in-20 avo heny noho ny nandoavam-bola tamin'ny Mondial no naloa tamin-dry zareo, hoy ny mpahalala izay. Tamin'ny andro voalohany noho izay tsy fetezana izay dia 25 minitra taty aoriana vao "nety ny sary". Diso ny filazako, nety ny sary satria tsy LC2 no nalefa fa Eurosport. Tsy voavaha mihitsy manko ny olan'ny sary saiky nampitaina tamin'ny ara-dalàna. Tena tsara tokoa re izany sary izany. Tamin'ny fihaonan'i Ghana sy Guinée io. Ny andro faharoa kosa rehefa rehefa nivoaka amin'izay ilay AFNEX LC2 fa dia aleo lazaina ambadika hoe mahay maka sary lavitra ny ao amin'ny TVM no tsara kokoa ny kalitaon'ny sary.
Dia io no nahatonga ahy nanoratra hoe efa mandoa vola be ve dia mbola sary ratsy dia ratsy no omena ny mpijery? Mba tsy rariny ihany. Fantatra anefa fa hatramin'ny taona 2011 no ifehezan'io LC2 io ny tsenan'ny CAN. Azy moa ny tsena ka izay tiany anaovana azy? Raha izany tsy aleo ve mipiraty e! (enga anie tsy hikatona ity sehatra ity amin'izao famporisihana hipiraty izao).
Manaraka izany indray satria izay ilay teboka telo amin'ny lohateny dia hilaza zavatra mahatsikaiky mahatsiravina aho. Efa hitantsika amin'ny gazety sasany angamba ny filazana fa atao renivohitra ara-toa-karena i Toamasina, (didim-panjakana moa dia mahapetraka izany?), dia lasa ny filazana tamin'ny faran'ny herinandro fa omena 100.000.000.000Ar ny any hanatsarana ny tanàna. Dia lasa indray ny teny, tsy hay na fanitsiana na fanomezana hafa indray fa vatsiana 100.000.000Ar ho fanatsarana ny tanàna (sa ny lapan'ny tanàna? tsy fantatra intsony!) fa dia misy elanelana 000 aloha io. Dia hoy aho hoe: misy finiavana handrangitra an'Antananarivo ve ao anatin'izany "fanaovana renivohitra hafa" izany?
Etsy ankilan'izay raha tokony ho anisan'ny nandray fitenenana tamin'ny fanokafana ny faha-40 taona ny FJKM tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina izy dia "niala tsiny" noho ny fisahanana andraikitra hafa. Tany Toamasina manko ny lehilahy ka ny fanokafana ny herinandro fiaraha-mivavaka tao amin'ny fiangonana anglikana tany no natrehiny. Efa "tsy tiako Iarivo" intsony ve? enga anie mba tsy ho izany.
Ity misy adinoko fa asosoko eto ihany, 25 minitra taorian'ny fanombohan'ny lalao ihany koa vao azo ny lalao voalohany omaly. Ny lalao faharoa izay tena nandrasan'ny maro ihany koa (CIV#NGR) dia dimy minitra taorian'ny fanombohan'ny lalao vao nandeha satria mbola nandeha manko ny kabarin'ny filoham-pirenena "ka sarotra angamba ny manapaka izany". Soa ihany aho fa 25 minitra taorian'ny lalao vao nijery satria noheveriko fa izay manko no saran'ny vola voaloan'ny Malagasy. namana iray no niteny tamiko io kabary niaretana io raha te-hijery baolina.
Mbola hiresaka zavatra hafa ihany koa. Niteny tamin'ny fandraisam-peo RDB ny Mgr Odon Razanakolona fa malahelo noho izao nampiatoana ny fandaharana "karajia" izao. Fampieritreretana ny rehetra ny ahy no ilazako izany, hoy izy fa tsy fitsikerana. Efa niainana manko ny tsy nampitana tamin'ny televiziona malagasy ny fotoanan'ny katolika hoy ny tenany. Hampitaiko amin'ny filankevitra maharitry ny fivondronamben'ny eveka hivory amin'ny volana ambony ity raharaha ity, hoy ihany izy. Misy moa ny mametraka fanamby fa afaka kelikely dia hiala amin'ny FFKM ny EKAR, dia ho hitantsika eo ny amin'izay aloha.
Ny senatera Kolo Roland ihany koa dia nilaza fa "rehefa sakanana tsy hiteny ny vahoaka dia tsy ho fantatry ny fanjakana mihitsy ny marina". Miresaka ny amin'ny nampiatoana ny karajia ihany izy amin'io. Maro ny zavatra madinika tian-kambara fa tsy haiko moa ny mametraka "bref" amin'ity vohikala ity mba mipetraka eo ankavanana eo fa raha izany no haiko teo an!